Somalia oo si adag u beenisay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibada ee Kenya… – Hagaag.com
Somalia oo si adag u beenisay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibada ee Kenya…
Posted on 20 Maajo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Xukuumada Soomaaliya ayaa si adag u beenisay hadal kasoo yeeray Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma , oo sheegtay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kawada hadleyn dacwada badda ee labada wadan u dhaxeeya.
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in aysan jirin wax wada hadal ah ay Dowlada Soomaaliya kala yeelatay dalka Kenya dacwada badda ee u dhaxeysa labada wadan.
Waxa uu sheegay Wasiirka in aysan dowlada Soomaaliya kala xaajoon Kenya in dacwada badda ee labada wadan u dhaxeysa in lagu xaliyo meel aan aheyn Maxkamada caalamiga ee Hague oo gacanta ku heysa kiiska dacwada labada wadan u dhaxeeya.
maxkamadda caalamiga ah ee Hague, waxaan idiin xaqiijinayaa inaanu
jirin wax intaas ka baddalan oo Kenya na dhex maray, inagoo ixtiraamayna darisnimada naga dhaxaysa” ayuu yiri Wasiir Cawad.
Hadalka kasoo baxay Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya ayaa meesha ka saaraya hadal dhawaan kasoo yeeray Wasiirka Arimaha Dibadda Kenya oo sheegtay in Madaxda dowlada kala hadleyn sidii wadahadal looga geli lahaa muranka badda ee labada wadan u dhaxeeya.